दलित गाउँका एक्ला न्यायाधीश | Hakahaki
दलित गाउँका एक्ला न्यायाधीश
काठमाडौं । आजको दैनिक पत्रपत्रिकाले राजनीतिक ध्रुवीकरण तीब, पहिलो चरणको उमेदवारी आज, न्यायालयको स्वतन्त्रता जोगाउन महाअभियोग, राप्रपाले सरकार छाड्यो, सरकारको बहुमत कायमै, सरकार अल्पमतमा कि बहुमतमा ? समुनत राष्ट्र निर्माणको उदघोष, दलित गाउँका एक्ला न्यायाधीश लगायत शीर्षकमा फ्रन्टपेज समाचार बनाएका छन् ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले ध्रुवीकरण तीब, अस्थिरताले चुनौती लगायतका समाचारलाई फ्रन्टपेज मा समाचार बनाएको छ ।
यसैगरी गोरखापत्र दैनिकले पहिलो चरणको उमेदवारी आज, न्यायालयको स्वतन्त्रता जोगाउन महाअभियोग शीर्षकमा फ्रन्टपेजमा समाचार छापेको छ ।
यसैगरी कान्तिपुर दैनिकले उमेदवारी दर्ता आज, राप्रपाले सरकार छाड्यो भनी फ्रन्टपेजमा समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
त्यस्तै, नागरिक दैनिकलेसरकारको बहुमत कायमै, नयाँ पत्रिका दैनिकले सरकार अल्पमतमा कि बहुमतमा ? राजधानी दैनिकले समुनत राष्ट्र निर्माणको उदघोष, दलित गाउँका एक्ला न्यायाधीश शीर्षकमा फ्रन्टपेजमा समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।
आजको राजधानी दैनिकमा निमेन्द्र शाहीले लेखेका छन्, “बाधु–४ धिमकी लाल्जु सार्की र सपुरा सार्कीले जग्गाको सिमाना विवादमा झगडा गरे । विवाद बढ्दै गएपछि दुवै पक्ष गाउँका मुखियाकहाँ न्यायका लागि पुगे ।
मुखियाले गाउँभित्रका सबैखाले विवादमा मिलापत्र विधिबाट सबैलाई न्याय दिने गरेको स्थानीय ललितजंग सार्की बताउँछन् । ‘गाउँमा केही समस्या आए हामी प्रहरी, प्रशासन, अदालतमा जानुभन्दा मुखियाकहाँ जाने र त्यही सबैको रोहवरमा मिलापत्र गर्छौ,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार यो वर्ष मात्र मुखियाले गाउँका नौवटा मुद्दा मिलापत्र विधिबाट छिनोफानो गरिसकेका छन् ।
पुर्खौंदेखि गाउँमा हुने झैझगडा मुखियाले मिलाउँदै आएका छन् । गाउँमा मुखिया छनोट गर्दा सबैको रोहवरमा छान्ने गरेको स्थानीयले बताए । एकपटक छनोट गरेर उसको मृत्यु भए, राजीनामा दिए र केही गल्ती काम गरे मात्र नयाँ छनोट गर्ने गरेको स्थानीय शेर सार्की बताउँछन् । सामान्य विवाद मिलाउन नजिकको सुरक्षा निकाय कवाडी चौकी पुग्नै ६ घण्टा लाग्ने र जिल्ला सदरमुकाम पुग्न दुई दिन लाग्ने कारण पनि गाउँलेले मुखियामार्फत नै विवाद मिलाउने गरेका छन् ।
मुखिया कर्ण सार्कीले गाउँमा भएका मुद्दामामिला र झगडा निःशुल्क मिलाउने र न्याय दिने गरेको बताए । ‘झगडा मिलाएको दिन खानासम्म झगडियाको घरमा खाने गरेको छु,’ उनी भन्छन् । आफ्नो नामसम्म लेख्न नसक्ने मुखिया सार्की पढ्नसमेत जान्दैनन् ।”